Iindaba -Izibonelelo zeGlasi eLaminethiweyo
Izinto eziluncedo ze Glass elaminethiweyo
Kuthetha ukuthobela imigangatho yesizwe yeglasi elaminethiweyo, iglasi enomsindo, kunye neglasi engenanto eyenziwe ngabo. Phakathi kwezi zinto, ukusebenza ngokubanzi kweglasi elaminethiweyo kunye neglasi engenanto eyenziwe ngeglasi elaminethiweyo yeyona nto ibalaseleyo. Kwizindlu zanamhlanje, isiphumo sokugquma isandi silungile, kwaye iye yaba yenye yezinto ezibalulekileyo ebantwini ukulinganisa umgangatho wezindlu.
Iglasi elaminethiweyo ene-PVB interlayer inokuthintela amaza esandi kunye nokugcina imeko yeofisi izolile kwaye ikhululekile. Umsebenzi wayo okhethekileyo wokucoca i-UV awukhuseli impilo yabantu kuphela, kodwa ukhulula nefenitshala exabisekileyo, ubonise iimveliso, njl. Iyanciphisa ukuhanjiswa kwelanga kwaye inciphise ukusetyenziswa kwamandla okupholisa.
Izibonelelo ezininzi zeglasi elaminethiweyo zinokuba neziphumo ebezingalindelekanga kunye ezilungileyo ekuhombiseni kwasekhaya. Iglasi yeglasi yomntu ophucukileyo yiglasi eqhelekileyo ngenkqubo yokunyanga ubushushu, amandla ayo ayonyuswa amaxesha angama-3-5, inokumelana nenani elithile lamandla kwimpembelelo yangaphandle okanye utshintsho lobushushu ngaphandle kokophuka, nokuba kophukile, kodwa nalo lonke iglasi yaphulwe kwincindi yobusi efana nokufumba amasuntswana amancinci Akukho lula ukwenzakalisa abantu kwaye ke ngoko unenqanaba elithile lokhuseleko.
Iglasi enomsindo ayinakunqunyulwa. Kufuneka isikwe kubungakanani ngaphambi kokuba icaphuke kwaye ineempawu zokuzikhulula. Ngokwemisebenzi eyahlukeneyo, iglasi enomsindo inokwahlulahlulwa ibe ziindidi ezahlukeneyo zeglasi, iglasi enobushushu obuncinci, iglasi enomsindo wengingqi, iglasi ethe tyaba, iglasi enobushushu egobile njalo njalo. Umzekelo, uninzi lweengcango zosapho, kubandakanya neminyango yasekhitshini, zenziwe ngeglasi eqandisiweyo. Imisi ekhitshini ikholisa ukuqokelelana ngaphezulu xa upheka, kwaye ukuba usebenzisa iglasi elaminethiweyo endaweni yoko, awuyi kuba nale ngxaki. Kwangokunjalo, ukwahlulahlula iglasi enkulu ekhaya kuyingozi yokhuseleko lwabantwana abasebenza ngokwendalo. Ukuba kusetyenziswa iglasi elaminethiweyo, abazali banokukhululeka. Nokuba iglasi iyaqhekeka, iziqwenga kunye neziqwengana ezincinci ezibukhali zihlala zincamathele kwifilimu ephakathi.
Iglasi ye-LED ikwabizwa ngokuba yiglasi yefotoelectric. Iglasi yamandla yindibaniselwano egqibeleleyo yomthombo wokukhanya kwe-LED kunye neglasi, kwaye ikwaphula ngombono wendabuko wezinto zokuhombisa zokwakha. Inokuyilwa kwangaphambili kuyilo lwangaphakathi lweglasi, kwaye kamva nge-teknoloji ye-DMX-yedijithali yokufezekisa utshintsho olunokulawulwa, ukulawulwa simahla kokukhanya komthombo wokukhanya kwe-LED kunye notshintsho. Ngaphakathi kusetyenziswa iingcingo ezibonisa ngokupheleleyo, ezahlulwe ziingcingo eziqhelekileyo kwaye aziboni nayiphi na imigca kumphezulu weglasi. Emva konyango olukhethekileyo kwinqanaba elilandelayo, zombini iimfuno zobugcisa kunye neemfuno zokhuseleko zifikelele kwisatifikethi esifanelekileyo sesizwe. umgangatho.